လူတိုင်း...လူတိုင်းမှာ ရည်မှန်းချက်ကိုယ်စီ.. ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ်စီတွေ ရှိကြပါတယ်။
လူအချို့က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတတ်ကြပြီး လူတစ်ချို့ကတော့ ထုတ်ဖော်မပြောတတ်ကြတာပဲ ကွာပါတယ်။
ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတာကတော့ လူတိုင်းရည်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်း သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကို လက်တွေ့ဘဝမှာ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။
ညဘက် ညဘက် မက်တဲ့ အိပ်မက်တွေ... နေ့ခင်းဘက်တွေမှာ ထိုင်ပြီးတွေးတောနေတဲ့ စိတ်ကူးတွေ... နောက်ကျသွားပြီဆိုတဲ့ အသိစိတ်တွေရဲ့နှောင့်ယှက်မှူတွေကြောင့် ရရှိသွားကြတဲ့ နောင်တ တရားတွေအဖြစ်နဲ့သာ လူတစ်ချို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဟာ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ကြရပါတယ်.
တစ်ချို့သော လူတွေက အောင်မြင်ကြပြီး ဘာလို့လူတစ်ချို့က ကျရှုံးခဲ့ကြတာလဲ?
လောကကြီးကပဲ မတရားတာလား? ကိုယ်တွေကပဲ တရားခြင်းဆိုတဲ့ သဘောရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် ခပ်ဝေးဝေး အရပ်တစ်ခုမှာ ရှိနေခဲ့လို့လား?
ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကို Turbo ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်လေးကိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါ လူတိုင်းဖြေနိုင်သွားကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီ Turbo ဆိုတဲ့ ကားလေးကို လူအများစုကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ ကျွန်တော်ကသာ အစကမကြိုက်ဘူးဆိုပြီး မကြည့်ခဲ့လို့အခုမှ ကြည့်ခဲ့ရတာပါ။
ဇာတ်လမ်းလေးက ရှင်းပါတယ်။ အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့Store ခန်းတစ်ခုမှာ သူ့ရဲ့အစ်ကိုဖြစ်သူနဲ့နေထိုင်နေတဲ့ Theo ဆိုတဲ့ ခရုလေးတစ်ကောင်ရဲ့အကြောင်းပါ။ သူ့ကို Turbo လို့လဲ ခရုတစ်ချို့ ကခေါ်ကြပါတယ်။ သူက ထိုနာမည်ကို ကြိုက်လို့သူ့ရဲ့အသိ ခရုတွေကို ခေါ်ခိုင်းတာပဲ ဖြစ်မှာပါ။ သူဘာကြောင့် ထို Turbo ဆိုတဲ့ နာမည်ကို နှစ်သက်သလဲဆိုရင် ညဘက် ညဘက်တွေမှာ TV ကလာတဲ့ ကားပြိုင်ပွဲတွေကို ကြည့်ပြီး ထိုကားတွေနဲ့အတူ ယှဉ်ပြိုင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးတွေနဲ့ရူးနေသူ တစ်ဦးဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်။ ညဘက်တွေဆိုလည်း မည်သူမှ မရှိချိန်တွေမှာ သူတစ်ယောက်တည်း အပြေးလေ့ကျင့်နေတဲ့ ညတွေဆိုလည်း မနည်းတော့ဘူး။ ပြီးတော့ ထိုကားပြိုင်ပွဲတွေမှာ အမြဲတမ်း အနိုင်ရရှိနေတဲ့ ချန်ပီယံကြီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Guy Gagné ဆိုသူကိုလည်း ဆရာတစ်ဆူသဖွယ်အားကျနေပြီး Inspirations တွေရယူနေတဲ့ ခရုတစ်ကောင်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က ခရုတွေကလည်း သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်က လောကမှာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိသလို သူကိုယ်တိုင်လည်း မဖြစ်နိုင်မှန်း သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိသိကြီးနဲ့အလိုရှိနေတာ ပြင်းပြတဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုလို့ခေါ်တဲ့ အိပ်မက် သက်သက်ပါပဲ။
တစ်နေ့မှာ သူတို့ခူးယူနေတဲ့မှည့်ဝင်းလှတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးတစ်လုံးဟာ မြက်ခင်းထဲကို ကျသွားတော့ မြတ်ရိတ်နေတဲ့ မြတ်ရိတ်သမား ထိုနေရာကို မရောင်ခင် အန္တရာယ်တွေကြားက သူပြေးပြီး ထိုခရမ်းချဉ်သီးကို သွားယူဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ အချိန်မမှီတော့ပဲ သူ့အစ်ကိုရဲ့ကယ်တင်မှူကြောင့် Turbo တစ်ယောက် အသက်ဘေးမှ သီသီကလေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ရပါတယ်။ ထိုအခါမှ သူ့ဘဝရဲ့အဖြစ်မှန်ကို လက်ခံလိုက်ရပြီး ပျောက်ပြယ်သွားတဲ့ သူ့ရဲ့အိပ်မက်တွေနဲ့အတူ ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲ မိုးရေတွေကြားမှာ သူလျှောက်သွားနေမိခဲ့ပါတော့တယ်။ တစ်ကယ်တော့ ထိုညမှာ သူ့ရဲ့ဘဝတွေကို ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့အိပ်မက်တွေဟာလည်း လက်တွေ့ဘဝမှာ သရုပ်မှန်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတော့တယ်။ ထို အဖြစ်အပျက်ကလေးက သူ့ရဲ့ ဘဝတစ်ခုလုံးကို ဘယ်လို ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့သလဲဆိုတာကတော့....
Director David Soren ကရိုက်ကူးခဲ့ပြီး Ryan Reynolds, Paul Giamatti, Michael Peña, Snoop Dogg, Maya Rudolph, Michelle Rodriguez နဲ့Samuel L. Jackson တို့ပါဝင်အသံသွင်းပြီး သရုပ်ဆောင်ပေးထားကြတဲ့ ဒီ Animation ကားလေးကတော့ ကလေးသူငယ်တွေသာမက လူကြီးတွေပါ နှစ်သက်စေမဲ့ ရုပ်ရှင်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားရဲ့Animations တွေဟာ Pixar ရဲ့Animations တွေလောက် မသပ်ရပ်ပေမဲ့ ပြောချင်တဲ့ သဘောတရား ပြချင်တဲ့ မြင်ကွင်း ပေးချင်တဲ့ Message ကတော့ Pixar ရဲ့Animations ကားတွေလိုပဲ အလွန်အနှစ်ရှိလှပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိလှပါတယ်။ သာမာန်အားဖြင့် ကြည့်လိုက်ရင် ဒီဇာတ်လမ်းလေးက ပေါတောတော နိုင်လွန်းပါတယ်။ ဘာတဲ့? အလွန်တရာ နှေးကွေးလှတယ်ဆိုတဲ့သတ္တဝါအမျိုးအစားတွေထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ခရုအမျိုးအစားတွေထဲက ခရုတစ်ကောင်ဟာ အရမ်းကို မြန်ဆန်သွားပြီး ကားတွေနဲ့တောင် ကားပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ အလွန်တရာကို ပေါတောတော နိုင်လွန်းပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ပဲ ကျွန်တော် အရင်က မကြည့်ခဲ့မိတာပါ။ ကျွန်တော်မှားသွားပါတယ်။ ထို့ကဲ့သို့ပေါ့ပြက်ပြက်တွေးလိုက်တဲ့ အတွေးတစ်ခုကြောင့် ကျွန်တော်မှားသွားခဲ့တာပါ။
ဒီရုပ်ရှင်လေးက ကြည့်ရှူနေသူ ပရိသတ်မျိုးစုံကို ရသ (10) ပါးစလုံးလည်း ပေးစွမ်းနိင်ခဲ့သည့်အပြင် အောင်မြင်ခြင်း ကျဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ သဘောတရားကိုလည်း ကွက်ကွက်ကင်းကင်း နားလည်စေနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဘာကြောင့်ထိုကဲ့သို့ သိရှိခဲ့ရသလဲဆိုရင် ဒီဇာတ်ကားရဲ့နောက်ဆုံးခန်းမှာ ပြသခဲ့တဲ့ တင်ပြချက်လေးတစ်ခုကြောင့်ပါ။ မကြည့်ရသေးတဲ့ သူတွေ Spoilers ကိုရှောင်သွားချင်ရင် ဒီအပုဒ်လေးကို ကျော်ဖတ်သွားလိုက်ကြပါ။ ပြိုင်ပွဲမှာ ယှဉ်ပြိုင်လာခဲ့ရတဲ့ မောပန်းမှူတွေ မနာလိုသူတွေရဲ့နှောင့်ယှက်မှူတွေကြောင့် ရရိခဲ့တဲ့ အခွံပေါက်ပြဲသွားတဲ့ ဒဏ်ရာတွေ စသည်ဖြင့် ပြေးနိုင်တဲ့ စွမ်းအင်တွေ မရှိတော့တဲ့ သာမာန်ခရုတစ်ကောင်ရဲ့ဘဝကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသည့်တိုင် ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ခွန်အားလေးနဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့အဆုံးသတ် Line လေးအထိရောက်အောင် မာန်ကိုတင်းလျက် ဖြေးဖြေးချင်းကြိုးစားပြီး သွားနေတဲ့ အခန်းလေးဟာ လူတွေ ဘာကြောင့် အောင်မြင်ကြသလဲ? ဘာကြောင့် ကျရှုံးသွားကြလဲဆိုတာကို သိလာခဲ့ရပါတော့တယ်။
အခုတစ်လောကြည့်ခဲ့ရတဲ့ Animations ကားတွေထဲမှာ The Lego Movie ထက်ကျွန်တော်ဒီကားလေးကို ပိုနှစ်သက်မိပါတယ်။ ဒီလိုပြောလို့Lego Movie က မကောင်းဘူး မဟုတ်ပါဘူး။ Lego Movie လေးက ပြချင်တဲ့ သဘောတရားတွေ များပြားနေပြီး Characters တွေများပြားလွန်းတဲ့ အချက်ရယ် နောက်ဆုံး အဆုံးသတ်တစ်ခုရယ်ကြောင့် ကျွန်တော် မျှော်လင့်ခဲ့သလောက် မနှစ်သက်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ထို Lego Movie လေးလဲ ပေးခဲ့တဲ့ Message လေးကို အလွန်နှစ်သက်မိပါတယ်။ သူရဲကောင်းဆိုတာ တစ်ကယ်တော့ မင်းသူရဲကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုပြီး နမိတ်ဖတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းဟာ သူရဲကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အားကိုလည်း ပြသသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပေးသွားခဲ့တဲ့ Message တွေအကုန်လုံးကို ကြိုက်ခဲ့ပေမဲ့ Toy Story ဆန်ဆန် ဇာတ်သိမ်းကို မကြိုက်ခဲ့လို့ ယခု Turbo ရုပ်ရှင်ကို ပို နှစ်သက်စေမိခဲ့တာပါ။
တစ်ကယ်တော့ Turbo ဟာ သာမန်ခရုတစ်ကောင်ပါပဲ။ မဖြစ်နိုင်တဲ့ စိတ်ကူးတွေကို ယဉ်နေပေမဲ့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာတွေ လက်တွေ့ဘဝမှာ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး သူ့ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်ဝလာကာ သူ ကားမောင်းပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်တယ်။ နောက်ဆုံးအစွမ်းတွေ ပျက်ပြယ်သွားသည့်တိုင် ကျန်ရှိနေတဲ့ လုံလနဲ့မရပ်မနားပဲ ဆက်သွားနေခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကြည့်ရင်ပဲ အောင်မြင်တဲ့ လူတွေဟာ ဘဝမှာ ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးပဲ ဆက်လက်ချီတက်သွားနေတဲ့ သူတွေဆိုတာ နားလည်လာခဲ့ပါတယ်။ ထို့ပြင် ဘဝမှာ လွယ်လွယ်နဲ့အရှံးပေးခဲ့တဲ့ သူတိုင်း မအောင်မြင်ခဲ့ကြပါဘူး။ အောင်မြင်ရင်တောင် ကံကြောင့် အောင်မြင်တာဖြစ်ပြီး ဇွဲနဲ့လုံ့လမရှိတဲ့ အတွက် သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှူဟာလည်း ကြာရှည်မခံပါဘူး။ ဒီလိုဆိုတော့ ကြိူးစားတိုင်းလည်း အောင်မြင်ကြလားဆိုတော့ မအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့ သူတွေလည်း လောကမှာ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ပြန်ပြောဆိုနိုင်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကတော့ "At least I tried." ဆိုတာပါပဲ။ အောင်မြင်မှုဟာ ဂုဏ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကြိုးစားခြင်းသာလျှင် ဂုဏ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူတွေတွေ နားလည်နိုင်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါရစေ။
Turbo က ကျွန်တော်တို့ကို Inspirations တွေပေးခဲ့ပါတယ်။
Turbo က ကျွန်တော်တို့ကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။
လူတိုင်းအတွက် Turbo ပါ။
P.S ကျွန်တော် ထိုကားကို ကြည့်တဲ့ မနက်က ကျောင်းပြေးပြီး အိမ်မှာ ရုပ်ရှင်တွေပဲ ကြည့်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့ နေ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီကားလေးကို ကြည့်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းစိတ်ပြောင်းသွားပြီး လွယ်အိတ်ကို ကောက်ယူကာ ကျောင်းသွားပြီး အတန်းသွားတက်ခဲ့ပါတယ်။ Turbo က ကျွန်တော်ကို မပျင်းပဲ ကြိုးစားဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။